Design | My Burmese Blog
Posts Tagged: Design	Vote for Blog Banners Of 2010
On April 30, 2010	by Htoo Tay Zar	With	2 Comments	- Creation, Design	Folding The Colors လို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ design project တစ်ခု လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ ပတ်ကျော်က လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ Adobe Photoshop CS4 ကို သုံးပြီး လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ Design concept ကရှင်းရှင်းလေးပါ အရောင်တွေပဲ ကစားလိုက်တယ်။ အိုင်ဒီယာက ဘယ်ကရလဲဆိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကဆွဲခဲ့တဲ့ လိုဂိုကနေပဲ ရပါတယ်။ အဲဒီ လိုဂိုတုန်းကလဲ အရောင်ပဲ ကစားပြီးလုပ်ထားတာ.. အဲဒါကို တွေးမိပြီး လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
Tip For Using Graphic Tablet
On April 27, 2010	by Htoo Tay Zar	With	1 Comments	- Adobe, Design	Graphic Tablet တွေသုံးကြတဲ့ အထဲမှာ အဓိက အများဆုံးသုံးကြတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က analog ကရတဲ့ result မျိုးကို digitize အလွယ်တကူ လုပ်ချင်တာက အရေးကြီးတဲ့ အချက်ပါပဲ။ တချို့ကလဲ outline လိုမျိုးဆွဲဖို့ သုံးကြတယ်။ အဲဒီအတွက်ကတော့ သာမန်အနေနဲ့ သိပ်မလိုပါဘူး အရင်ကဆို ကျွန်တော်လဲ စာရွက်ပေါ်မှာ sketch ဆွဲပြီးမှ ရှိတဲ့ ဖုန်းကင်မရာနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး digitize ပြန်လုပ်ပါတယ်။ Scanner ရှိရင်တော့ ဓာတ်ပုံရိုက်စရာမလိုပဲ ပိုလွယ်တာပေါ့။ အခုကတော့ tablet သုံးရင်းရလာတဲ့ tips တချို့ကို ပြန် share တာပါ။
Design, Tips, Wacom	Continue Reading
Swatch CreArt ~ for Inspiration!!
On April 19, 2010	by Htoo Tay Zar	With	1 Comments	- Design	Swatch လက်ပတ်နာရီ ကြော်ငြာ ဒီနေ့ ထပ်ခါထပ်ခါ ကြည့်မိတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင် လဲလုပ်ထားတယ်.. animation လဲ အရမ်းကောင်းလို့ပါ။ နောက်ဒီရက်တွေမှာ handdrawn characters, vibrant colors တွေပဲ ကြည့်မိနေတာလဲ ပါလိမ့်မယ်။ 3D animation တွေပဲ ကြည့်ဖြစ်နေတာလဲပါတယ်။ Denmark က studio အသေးလေး Thank You ဆိုတာကနေ လုပ်ထားတာပါ။ Ad, Design, Inspiration	Continue Reading
Fun With Doodle Wallpaper Pack
On April 15, 2010	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Creation, Design	Wallpaper Pack တစ်ခု DeviantArt မှာ တင်ဖြစ်တယ်။ Fun with Doodle လို့ပဲ နာမည်ပေးထားလိုက်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လျောက်ခြစ်ထားတဲ့ ကာတွန်းရုပ်တွေ မို့ပါ။ လျောက်ခြစ်ရင်းနဲ့ Japanese Cartoon တွေရဲ့ facial expressions ပါ လေ့ကျင့်ရင်း လုပ်ထားတာမုို့ပါ။ အရုပ်တွေကတော့ အရောင်တွေ လျောက်ချယ်ထားတယ်။ နောက် လူပုံနဲ့တွဲထားလိုက်တော့ တစ်မျိုးဆန်းသွားတယ်ထင်လို့။ Wallpaper Pack ကို Download လုပ်ယူနိုင်ပါပြီ။ iPhone, 800×600 ကနေ HD TV, 27 inch iMac အထိပါပါတယ်။ Have Fun!!
Design, wallpaper	Apple iAd iCons Download!!
On April 9, 2010	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Apple, Design	Apple iPhone OS Version 4.0 Developer Preview ကတော့ စောစောကပဲပြီးသွားပါပြီ။ အဲဒီမှာ Steve ပြောသွားတဲ့ Apple ရဲ့ iAd Advertisement Platform icon တွေ့မိတာနဲ့ ပွဲပြီးပြီးချင်းပဲ photoshop နဲ့ icon set တစ်ခုလုပ်လိုက်ပါတယ်။ .PNG format သုံးပြီး Standard အချိုး size တွေ ပါပါတယ်။ ကျွန်တော့် deviantArt မှာ Download လုပ်ယူနိုင်ပါပြီ။ 4.0 Preview ကတော့ နောက်ရက်မှ ရေးပါတော့မယ် အခုတော့ အိပ်တော့မယ် Good Night!!
Apple, Design, Icon	Under Skin ~ Anatomy Map
Secret Behind Graphic Design
On November 26, 2009	by Htoo Tay Zar	With	6 Comments	- Design, Knowledge	ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော် အရင်လို အရေမရအဖတ်မရ သတင်းတွေ သီချင်းတွေ personal တွေ မရေးတော့ပဲ tutorial သဘောမျိုးလေးရေးပါရစေ။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်တတ်လို့ရေးတာ မဟုတ်ပဲ သိသလောက်သာဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ကတည်းက ဆရာလုပ်တယ်ထင်မှာစိုးလို့ အဲဒါမျိုးလဲ သိပ်မရေးဖြစ်ပါဘူး အခုနောက်ပိုင်းတော့ နည်းနည်းချင်းစီ ဆရာလုပ် အဲလေ ရေးသွားမယ်လို့ စဉ်းစားထားပါတယ်။ အခုရေးမယ် အကြောင်းကတော့ Graphic Design အကြောင်းပါ။ ဘယ် ဆော့ဝဲ၊ ဘယ် tools အတွက်ရယ်လို့ မဟုတ်ပဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကြောင်တောင်တောင် အတွေးအခေါ်တွေလို့ ပြောချင်ပြောလို့ရပါတယ်။
Design, Knowledge, Tutorial	Continue Reading
Firefox Personas Themes
On October 31, 2009	by Htoo Tay Zar	With	2 Comments	- Design, Firefox	ဒီနေ့တော့ အလုပ်များလို့ ပင်ပန်းနေတာကြောင့် အခြားအကြောင်းအရာတွေ မရေးဖြစ်ပဲ Firefox မှာ Themes ပြောင်းတဲ့ Plug In တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Personas (Read More Here!!) အတွက် လုပ်ထားတဲ့ theme တချို့ကို စုထားလိုက်ပါတယ်။
Design, Firefox	Continue Reading